Ciidamada Liyu Police-ka gobolka Soomaalida oo ka ugaadhsanaya siyaasiyiinta Soomaalida magaalooyinka uu fadaraalku maamulo. – Rasaasa News
Hogaankii hore ee nabadgaliyada gobolka Soomaalida Cabdi-Cadil Xasan ayaa Jamcihii waxaa magaalada Dire Dawa ka soo af-duubeen koox ka tirsan Liyu Police-ka gobolka Soomaalida. Waxaa la sheegay in af-duubka ay sameeyeen ciidamo si gaar ah uga hawlgala xarunta madaxtooyada ee gobolka Soomaalida.
Cabdi-caadil wuxuu daganaa magaalada Dire Dawa tan iyo intii laga qaaday xilka jagada hogaanka nabadgaliyada gobolka Soomaalida. Wali ma cada sababta keentay in xiligan laga af-duubo maamulka Dire Dawa laakiin waxaa la xaqiijiyay in la geeyay xabsi ku yaala magaalada Jijiga.
dhawrkii todobaad ee ugu dambeeyay waxaa magaalada Jijiga ee xarunta gobolka Soomaalida lagu xidhay siyaasiyiin Soomaali ah oo ay tiradoodu ka badan tahay afar darsin ayaa dhamaantood waxay ka tirsan yihiin xisbiga talada haya ee barwaaqada.
Marka la xidho siyaasiyiinta Soomaalida wax maxkamad ah lama soo taago qaarkoodna inta ay xabsiga ku jiraan waxaa lagu sameeyaa jidh-dil kadibna waxaa dhacda in la siidaayo iyaga oo aan loo sheegin dambiga ay ku xidhnaayeen.
Cabdi-caadil wuxuu dagnaa Dire Daw tan iyo 2016 isaga oo ka mid ahaa dadkii horaan uga soo horjeedsaday maamulkii Abdi Maxamud Cumar Cabdi-Iley, ayaa wuxuu mid noqday maamulka Muste Cagjar 2018.
kani waa dhaqan kalitalisnimo oo Itoobiya ka jira in masuuliyiinta xukuumada fadaraalka iyo hogaamada maamul goboleedyada Itoobiya midkoodna kuma dhaqmo shuruucda cadaalada ee dalka u yaala waxaana maxaabiista la iskagahayaa jeelasha maxkamad la,aan.
Waxaa kale oo ka dhaca Itoobiya dhacdooyinka la yaabka leh oo ah, in muwaadinku dambiile u noqodo madax maamulka gobolkiisa isaga oo aan dambiile ka ahayn qaranka. Tusale muwaadin ayaa wuxuu dagan yahay caasimada Itoobiya isaga oo aan dambiile ahayn, laakiin wuxuu dambiile ka ahaan gobolkiisa. Marar badan waxaad arki muwaadin Itoobiyaan ah oo ay badhtamaha Addis Ababa ka afduubayaan booliska gaarka ah ee gobolada oo laga soo diray maamul goboleeyda dalka ciidamada nabadgaliyada ee dawlada fadaraalku ma faragaliyaan iyaga oo arkaya sida xun ee loola dhaqmayo muwaadinka.
Xasuuqii Wardheer iyo Xiisaha Taariikhda Febraayo